ရိုင်း Toro | ထိပ်တန်းအပေါက်ဆိုက်ကို | Mobile Casino Online | £€$800 Deposit Bonus :)
The Wild Toro Slots Bonus will immediately enliven up your mood withavery cartoon like set-up ofasmall town in Spain, အဆိုပါဒေါက်၏နောက်ခံဝန်းကျင်ရုမ်းမင်းလူတို့နှင့်အတူကျပန်းထားရှိတဲရှိပါတယ်. ကဒ်အထိုင်၏ဆောင်ပုဒ်တစ်ခု matador ကြီးမားတဲ့သောနွားထီးတကောင်နှင့်အတူတိုက်ရှိရာစပိန်၏နွားထီးတကောင်-တိုက်ခိုက်နေတစ်ဦးလူကြိုက်များအားကစားအပေါ်အခြေခံသည်. ဒီတော့အယူအဆအဖြစ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာထို matador နွားသို့မဟုတ်ဒုနျအလှနျနိုင်မှစီမံခန့်ခွဲကြောင်းထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ပါတယ်, ဆုကြေးငွေသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ထည့်သွင်းရ. လူမျိုး၏ Muffled အသံတွေကိုသင်တစ်ဦးအလုပ်များမြို့ရဲ့ခံစားပေးကြဖို့နောက်ခံထား.
တောရိုင်း Toro slot ၏ရေးသားသူအကြောင်း
ဆတ်စတူဒီယို Bloopers နှင့်တောရိုင်း Toro slot နှစ်ခုနဲ့တူဂိမ်းနှင့်အတူဂိမ်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အမှတ်အသားတစ်ခုလုပ်ဖို့စီမံထားပါတယ်သောသူတို့အား developer များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲရေးသူလေးနှစ်နောက်ကျောက၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးစတင်များနှင့်အောင်မြင်စွာအပ် 8 ယခုတိုင်အောင်ဂိမ်း. အဆိုပါကုမ္ပဏီသူတို့ပေးဂိမ်းများ၏အရည်အသွေးမှာရှာဖွေနေအလွန်မကြာမီဒိုမိန်းအတွက်တိုးမယ်.
အဆိုပါလောင်းကစားအကွာအဝေးအကြားကျရောက် 0.20 ဒီအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းထဲမှာ. ယင်းတောရိုင်း Toro slot နှစ်ခု၏သင်္ကေတများအလွန်ထူးခြားတဲ့များမှာ. သငျသညျအကြားတစ်ဦးဓါးနှင့်အတူလိုက်သည်ကိုလိမ္မော်ရောင်ရှိ, တစ်နှင်းဆီ, ခရမ်းရောင်အရောင်တစ်ခုမရနိုင်ပါဘူးပန်ကာများနှင့်3ကိုရွှေ, ငွေ, ကြေးဝါ၏ကွဲပြားခြားနားသောဒင်္ဂါးပြား. ထိုအခါ reel အာကာသအနှံ့ထားရှိအဝါရောင်အရောင်စောင်းရေးထားလျက်ရှိ၏ရိုင်းရိုင်း Toro သင်္ကေတလည်းမရှိ. အဆိုပါကြဲဖြန့်သေးငယ်တဲ့နှုတ်ခမ်းမွေးနှင့်အတူအမျက် ထွက်. matador ဖြစ်ပါသည်. ထိုအခါလည်းမရှိ, ဒါပေါ့, သငျသညျမှာပြုံးနေဦးချိုများနှင့်ကြီးမားသောသွားများနှင့်အတူဒေါသထွက်နေတဲ့နွားလားဖြစ်သောဂိမ်း၏လမ်းလျှောက်ရိုင်း. နှင်းဆီပန်းကိုသင်၏အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကိုလိုက်လျော 1,000 အတူ knifed လိမ္မော်ရောင်နေဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခရက်ဒစ် 500 ဒင်္ဂါးပြား. ရှိပါတယ် 178 အနိုင်ရ paylines.
အဆိုပါတောရိုင်းသင်္ကေတသင်တို့အဘို့ကအနိုင်ဂိုးပေါင်းစပ်ဖြစ်စေခြင်းငှါကြဲဖြန့် မှလွဲ. အရာအားလုံးအစားထိုး. တောရိုင်းသင်္ကေတများနှင့်အတူတစ်ဦးက payline အမြင့်ဆုံးပေးချေမှု၏ဂုဏ်ယူ. အဆိုပါတောရိုင်း Toro သင်္ကေတကိုသာပဉ္စမ reel ပေါ်. တစ်ဦး Walking တောရိုင်းများနှင့်ရေပြင်ညီတစ်ဦးချင်းစီလှည့်ဖျားနှင့်အတူအနှံ့ရွေ့လျားအဖြစ်ရိုင်းသောနွားထီးတကောင်လုပ်ရပ်များ. ကလှုံ့ဆော်ပေးသည့်အတိုင်း, ကရိုင်းဖို့အားလုံးကို Matadors ပြောင်းလဲပြီးတော့ပထမဦးဆုံး reel အပေါ်ရိုင်းအဖြစ်ငြိမ်း. ရယူခြင်း3ဒုတိယ၏ reels အပေါ် Matadors, တတိယ, နှင့်စတုတ္ထ reels အခမဲ့ပြန်လည်လှည့်ဖျားဘို့အကောင့်. အဆိုပါ Matadors သူတို့တည်ရာအရပ်မှကပ်နှင့်အခြား Matador အဆိုပါ reels ပေါ်အဖြစ်အပိုလှည့်ခြင်းများကိုတက်လာ.
ရိုင်း Toro slot နှစ်ခုရုံလောင်းကစားရုံ slot ကအတူတစ်ဝှမ်း laze လိုသောကစားသမားများအတွက်အံ့သြဖွယ်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်, ပြီးအန္တရာယ်များတဦးတည်းဆော့ကစားချင်ကြပါဘူး. ဆတ်စတူဒီယို, ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူကဒ်အထိုင်အတွက်ဂိမ်းတွေနဲ့တကယ်သဘောကျရှိပါတယ်.